Etu esi enweta wijetị desktọọpụ na Windows 10 | Akụkọ akụrụngwa
Etu ị ga-esi nweta wijetị desktọọpụ na Windows 10
Otu n'ime ihe kacha mma nwere ike ime na Windows Vista bụ mgbakwunye nke wijetị desktọọpụ. Ma ọ bụghị ya, anyị nwere ike ikwu obere ihe banyere sistemụ arụmọrụ nke jisiri ike mee ka ọtụtụ ndị ọrụ cheta Microsoft na ebughi oke ebumnuche.
Na Windows 8, ewepụrụ ha n'oge na-adịbeghị anya, na Windows 10 ọhụrụ ahụ anyị enweghị ha. Ya mere o yiri ka anyị agaghị enwe ha n’ọdịnihu, n’agbanyeghi na ọ bụ enwere ike site na ngwa na anyị nwere ike iwunye na kọmputa anyị.
Ya mere, anyị ga-enwe wijetị ndị ahụ na Windows 10 ọzọ, ọ bụ ezie na mgbe ị wụnye ụfọdụ wijetị ị kwesịrị ịkpachara anya jiri ihe ebudatara.
1 Esi nweta wijetị na Windows 10
2 Nhọrọ ọzọ: 8GadgetPack
Esi nweta wijetị na Windows 10
Ihe mbụ bụ ịwụnye Ngwaọrụ Desktọpụ Ngwa
Anyị na-ewepu faịlụ zip na anyị soro ntuziaka na ihuenyo iji wụnye mmemme a
Mgbe anyị rụnyere ngwa, anyị pịa aka nri na desktọọpụ
Ugbu a Nhọrọ "Ngwa" na nhazi menu. Anyị na-ahọrọ ya
Na ihuenyo ga-egosi na anyị na-aga nhọrọ «Download ọzọ Ngwa online». Anyị na-eme nke a n'ihi na Microsoft emechiela sava ndị isi wijetị na-enweta ozi ahụ
I nwekwara ike ịnweta Gaa na ibe a iji nweta wijetị ndị ọzọ
Nhọrọ ọzọ: 8GadgetPack
8Ọtọ Ezubere ya maka Windows 8 mana ọ bụ dakọtara na Windows 10. Mgbe echichi, a ga-atụkwasị ya na menu menu dịka ọ dị na ngwa gara aga. Ọ bụrụ na ị wụnyela ya, ọ ga-eji 8Gadget dochie ya.
8Gadget nwere 45 wijetị dị iche iche yabụ ị ga - enwe ezigbo ndepụta iji mejupụta wijetị gị na Windows 10. N’etiti ụfọdụ atụmatụ ị nwere ike ịbawanye ogo wijetị.
Nhọrọ abụọ iji weta wijetị ndị ahụ na Windows 10 na na ohere oge site na desktọọpụ ọ bụ ezie na anyị enworị ya site na mbido menu. Na, ọ bụrụ na ihe ọ bụla kpatara gị chọrọ nje maka sistemụ arụmọrụ a bia ebe a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Etu ị ga-esi nweta wijetị desktọọpụ na Windows 10
UE BOOM a kọmpat na ezi sounding jupụtara na nkume Bluetooth ọkà okwu